System Restore Error in Windows 10 — MYSTERY ZILLION
System Restore Error in Windows 10
Windows 10 Pro မှာ System Restore လုပ်တော့ error တက်နေလို့ပါ။
( System Restore did not complete successfully. Your computer's system files and settings were not changed.
Access is denied. (0x80070005).......)
အဲဒီ error code ပြနေပါတယ်။
ပြီးတော့ Right Click နှိပ်တဲ့အခါတိုင်းလဲ ( VpShellRes.dll could not be found) ဆိုတဲ့ error တစ်ခုတက်နေပါတယ်။
ပြဿနာအစကတော့ VMware Workstation ကို Upgrade လုပ်တာကနေစဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ Upgrade လုပ်ရင်းနဲ့ Uninstall လုပ်သွားပြီး C:\_Program Files အောက်မှာ vm-support.vbs နဲ့ unattend.com ဆိုတဲ့ file နှစ်ခုကကျန်နေပါတယ် ဖျက်လို့လဲမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီ file နှစ်ခုကို ဖျက်တာကနေဖြစ်သွားတာလားမသိပါဘူးရှင့်။ ခုထိလဲဖျက်လို့မရသေးပါဘူး။
Windows Key လဲခေါ်လို့မရ၊ Taskbar ကနေလဲ ဘာမှနှိပ်လို့မရ၊ software တွေလဲဘာမှမရှိဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ပြန်တင်တော့ အကုန်တင်မရပါဘူး တစ်ချို့ software (eg. Keyman, Microsoft Office) တွေမှာ error တက်နေပါတယ်။
Windows ပြန်တာတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတင်ဘဲ Restore ပြန်ခေါ်လို့ရရင် ခေါ်ကြည့်ချင်သေးလို့ပါ။
Thanked by 1 Pyae_Phyoe_Kyaw12
No need for window install , window 10 support RESET function and how to reset your window 10.Please see the following link.
ဟုတ် မနေ့က လုပ်ြကည့်ပါသေးတယ်။ setting ကို သွားလို့မရဖြစ်နေတာပါ။